गभर्नरको सबै चकित हुने सम्पत्ति : ससुरालीको दाइजो भनेपछि छानविन गर्न माग [विवरणसहित] – Online Nepal
गभर्नरको सबै चकित हुने सम्पत्ति : ससुरालीको दाइजो भनेपछि छानविन गर्न माग [विवरणसहित]
May 19, 2020 309
काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैक गभर्नर देशको सर्वोच्च ओहोदाको पद मध्यको एक हो । उक्त पदमा अहिले महाप्रसाद अधिकारीले नियुक्त छन् । उनले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ३२ को उपदफा ३२ (४) अनुसार सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका छन् । उनी आफैले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति बिबरण विवादमा तानिएको छ । उनको अधिकांश सम्पत्ति पत्नी सरिता अधिकारीको नाममा देखिएपछि उनीमाथि ठूलो प्रश्न उठेको छ । एक त त्यसको स्रोत उचित रुपमा खुलाउन सकेका छैनन् ।
यसरी शंकास्पद रुपमा गभर्नर अधिकारीको सम्पत्ति धेरै देखिएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । गभर्नर अधिकारीद्वारा सार्वजनिक भएको सम्पत्ति विवरणमा अधिकांश स्थानका घर जग्गाहरू पत्नीको नाममा रहेको देखिएको छ । मोबाइल, टिभी, फ्रिज लगायतका विलासिताका सामान मात्रै गभर्नर अधिकारीले आफ्नो नाममा १४ लाखमा खरिद गरेको उल्लेख छ । अधिकारी परिवारसँग २७ तोला सुन रहेको छ भने ९ लाख मूल्य बराबरको टोयोटा कार रहेको छ ।
त्यस बाहेक अन्य २ वटा मोटरसाइकल पनि छ । अधिकारीसँग बिभिन्न जिल्लाका १० ठाउँमा जमिन रहेको छ । उनीसँग १८ हजार रुपियाँ नगद मौज्दात रहेको छ । उनले मध्यतमोर जलविद्युत आयोजनालाई सेयर इन एडभान्स वापत ५० लाख रुपियाँ ऋण दिएका छन् । आफ्ना हितैसी निर्मल र केशवलाई ९ लाख रुपियाँ ऋण दिएका छन् । २ लाख ३६ हजार २ सय १३ कित्ता सेयर रहेको छ । उनीसँग नविल बैंक, हिमालयन बैंक, सिद्धार्थ, बैंक अफ काठमाण्डू, सनराइज, एभरेष्ट, मेगा लगायतका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूमा सेयर रहेको उल्लेख छ । अधिकांश सम्पत्ति ससुरालिबाट विवाहमा दाइजो र बकसपत्रबाट प्राप्त भएको उल्लेख छ । हेरौ सम्पत्ति विवरण ।From janaboli
Prevनेपाल भारतमा विलय गराउँ: तर, नाम नेपाल राखौं : महेन्द्र । अवश्य पढ्नुहोस्
Nextकोरोना भ्याक्सिन बनिसकेको इजरायलका रक्षामन्त्रीको घोषणा, विश्वभरी प्याक गरेर पठाउँन मात्र बाँकी
अन्ततः यस्तो सर्तसहित निषेधाज्ञा हटाउँदै प्रशासन, भर्खरै निकाल्यो यस्तो सूचना !
के साचिक्कै भोलीबाट सार्वजनिक यातायात चल्छन् त ? यसो भन्छ यातायात व्यवसायी संघ
८५ वर्षमा हिंडिरहेका धर्मेन्द्र आफ्ना दुई पुस्तासंग खेल्दैछन् फिल्म, भन्छन्,‘जबसम्म काम गर्न लायक रहन्छु, त्यतिबेलासम्म एक अभिनेताका रुपमा काम गरिरहने छु ।’